ụlọ mkpo sanwichi dị ọcha ụlọ ọrụ | China Sanwichi Sanwichi panel Manufacturers, Suppliers
75mm 50mm fireweight lightweight gwara mmanụ EPS ciment mgbidi panel maka ụlọ nkwakọba ihe ụlọ nrụpụtara
ọhụrụ ụdị elu larịị silicate sanwichi obubọk obubọk
Na-akwado ezigbo akwụkwọ akwụkwọ PCGI dị mma nke nwere aluminom silicate. Aka ejiri GI ma ọ bụ Aluminom profaịlụ etiti.
fireproof MGO osisi magnesium oxide sandwich panel
fireproof silicon rock sandwich panel maka mgbidi ụlọ dị ọcha ụlọ
50mm 75mm 100mm ọkpụrụkpụ akwụkwọ n'ụgbụgbọ mmanụ a sandụ dị ọcha maka ụlọ ụlọ ọgwụ ọgwụ ICU dị ọcha
Usoro mgbidi ụlọ dị ọcha bụ bọọdụ mejupụtara ejiri akwa nchara e ji agba agba kọọ dị ka isi ihe dị iche iche. A na-eme ka akụkụ anọ nke mbadamba ahụ sie ike ma jiri akara akara mechie ya. A na-emechi ogbako mmepụta site na iji bọọdụ nhicha, yana sistemụ ndị ọzọ nwere ike iji hụ na ịdị ọcha ụfọdụ. Ogo nke ohere iji zute nhazi nke ọrụ dị iche iche dịka nri, ọgwụ, ngwa elektrọnik na ngwaahịa ndị ọzọ. Na-akwado ezigbo mpempe akwụkwọ PCGI dị mma na EPS. Aka ejiri GI ma ọ bụ Aluminom profaịlụ etiti.
aluminom n'ụgbụgbọ sandwich panel na abụọ oyi akwa magnesium oxide mbadamba
ọkụ dị arọ aluminom n'ụgbụgbọ sandwich bọọdụ aluminom mejupụtara ogwe maka mgbidi na ịcha mma
mpempe mmanụ abụ fireproof sanwichi panel na abụọ oyi akwa magnesium oxide osisi maka ụlọ ọgwụ ọgwụ nri electronic
Na-akwado ezigbo mpempe akwụkwọ PCGI dị mma nke na-etinye mmanụ a honeyụ. Aka ejiri GI ma ọ bụ Aluminom profaịlụ etiti.
ogwe osisi sandwich sulfate magnesium maka ụlọ dị ọcha ụlọ ọgwụ nri ụlọ ọgwụ fireproof